Gudoomiyaha deegaanka Ceelcadde oo sheegay in la duqeeyay saddex goobood… – Wanleweyn – Hoyga Wararka Tayeysan – Wararka Soomaaliya
Gudoomiyaha deegaanka Ceelcadde oo sheegay in la duqeeyay saddex goobood…
C/rashiid Cali Cabdi (Qoorleex), ayaa sheegay goobaha la garaacay in ay ku sugnaayeen Ururka Al Shabaab, isagoo xusay in khasaaro buuran uu ka soo gaaray duqayntaasi.
Gudoomiyaha Ceelcadde oo hadda dibadda ka joogga deegaankaasi, ayaa yiri “Saddexda goobood ee la duqeeyay waxay ahayd bartilmaameyd, waa goobo ay ku sugnaayeen cadowga. Koley jab wayn ayaa ka soo gaaray, balse ma dhihi karno khasaaraha intaa ayuu gaarsiisan yahay.”
Gudoomiyaha oo la hadlay Warbaahinta gudaha, ayaa yiri “Sida aan ilo xog ogaal ah ka heleyno ma jirto wax khasaaro ah oo duqayntan ka soo gaartay dadka rayidka ah iyo xoolahooduba. Meelo gaar ah ayaa la duqeeyay oo cadowgu ay ku sugnaayeen.”
Qoorleex, ayaa intaa raaciyay “Duqaymahan waxay qayb ka yihiin duqaymaha ka socda dalka. Duqayntii xalay wax lug ah kuma lahayn Kenya, taas waa xaqiiqo, waxaanse ka cudurdaaranayaa inaanan sheegi karin ciddii fulisay.”
Shabaab, ayaan ka hadlin duqaynta xoogan ee caweysnimadii xalay ka dhacday deegaanka Ceelcadde, mana jirto cid sheegatay masuuliyadda duqayntaasi. Dagaal-yahanada Al Shabaab, ayaa horaantii sanadkan dagaal culus kula wareegay deegaankaasi Ceelcadde, ka dib markii ay dhawr jiho ka weerareen Ciidamadii Kenya ee fariisimaha ku lahaa.
Previous: Japan: Nin Ku Dhawaad 20 Ruux ku Dilay Middi
Next: ISIS oo Sheegatay Weerar Jarmalka Ka Dhacay